Thuthukisa i-SEO yakho, Funda mayelana nokusebenza kwe-Image! - Uchwepheshe we-Semalt
I-SEO ekhasini le-optimization yizinyathelo ezimbili eziyinhloko zomkhankaso we-SEO ophumelelayo. I-8 (injini) yokusesha ihlakaniphe kakhulu futhi ihlakaniphile ngesikhathi, futhi inqubo yokuthola simo esihle sokusesha ilula kakhulu. Okuqukethwe kwekhwalithi akwanele njengoba kufanele uqaphele izinto eziningi. Izici ezihlukahlukene zifaka isandla ekuboniseni izikhundla zezinjini zokusesha, futhi into ebaluleke kunazo zonke yindlela oyenzela ngayo izithombe zakho ze-SEO.
Uma ikhasi le-SEO liyinsika yewebhusayithi yakho, ukuhlelwa kwesithombe yisakhiwo sokwakha. UJason Adler, i- Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, ithi izithombe ziyizinto ezibonakalayo ezibonakalayo zamawebhusayithi akho futhi zihle kakhulu kunesihloko segama eliyinkulungwane. Kubalulekile ukusebenzisa izithombe kahle ukuze bakwazi ukuthumela umlayezo wakho ekuqaleni.
Qinisekisa ukuthi izithombe ozikhethayo zihambisana nokuqukethwe kwakho kwewebhu. Izithombe eziningi ezingabalulekile ngeke zikunikeze njenge-SEO imiphumela ephumelelayo njengesithombe esisodwa ene-alt ehambisanayo nencazelo.
Amathegi e-alt adlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni isithombe sakho. Basiza izithombe zakho zibonise imiphumela yosesho futhi ithuthukise isikhathi sokulayisha isayithi lakho. Zonke izinjini zosesho zixhomeke emibhalweni yezithombe zakho njengoba zingenakukwazi ukufunda okuqukethwe kwakho, ngakho-ke ama-alt kanye namathegi e-alt azokhipha isinqumo ukuthi izithombe zakho zingafakwa kanjani kumiphumela yesithombe se-Google..Omunye wemikhuba emihle yamathegi e-alt ukugcina amathegi afushane, achazwe futhi afike iphuzu.
Ukulinganisa isithombe nokubamba:
Usayizi wesithombe udlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni isipiliyoni somsebenzisi jikelele. Qinisekisa ukuthi izithombe ozisebenzisayo azizinzima kakhulu ukwandisa isivinini sakho sokulayisha. Sebenzisa izithombe ezincane namanje ezinhle ezilula ukubonisa imiphumela yemiphumela yokusesha. Sincoma ukuthi usebenzise izithombe ku-bytes. Amathuluzi afana ne-Yahoo Smushit angasetshenziselwa ukusula ama-byte ngokweqile kusukela ezithombeni, okwenza kube lula kunangaphambili.
Ukusingathwa kwezithombe kungenye into ebalulekile uma kuziwa ekukhiqizeni ithrafikhi engaphezulu kusuka ekusesheni kwesithombe se-Google. I-Google nezinye izinjini zokusesha zinikeza ukubaluleka kakhudlwana ezithombeni ezithathwe esizindeni esifanayo kunezithombe eziphathwe ezizindeni eziningi. I-algorithm enkulu yokuseshwa kwesithombe se-Google ukuxhuma kwezithombe ngombhalo wewebhusayithi yakho.
Njengoba nje igama elingukhiye libalulekile ku-URL yakho, amafayili amafayela ayadingeka ezithombeni zakho. Amafayili amagama agcwele amagama angamagama asiza izinjini zokusesha ukuhlola isayithi lakho ngendlela engcono. Akufanele usebenzise igama lefayela elizenzakalelayo, njenge-DSC0119.jpg, njengoba benganiki ulwazi olwanele mayelana nezithombe zakho. Esikhundleni salokho, kufanele usebenzise amafayela okuchaza achazayo kanye namagama angukhiye, okufanele ahlukaniswe yi-hyphens.
Ukuxhumanisa isithombe kanye namathegi wethimba:
Isithombe siyinto ekhangayo neyabheka amehlo echaza isayithi lakho nokuqukethwe kwalo. Ukuxhumanisa isithombe esifanele kufanele kube yi-SEO practice. Kufanele ugweme ukuxhumanisa izithombe zakho ngokuqondile. Kunalokho, kufanele ushumeke izithombe bese uthola izixhumanisi emuva kuwebhusayithi yakho. Futhi, kufanele usebenzise amathegi wegama elifanele. Ithegi yethekisi inikeza ulwazi mayelana nokuqukethwe kwakho lapho abasebenzisi behambisa isikhombisi sabo phezu kwezixhumanisi. Kubalulekile ukwengeza incazelo ye-SEO enobungane namagama angukhiye afanele kumathegi wakho wendaba Source .